मानुषी लघुवित्तको आईपीओ साेमबारबाट काराेबारमा आउने, कतिमा खुल्ला पहिलाे काराेबार ? - Arthasansar
मानुषी लघुवित्तको आईपीओ साेमबारबाट काराेबारमा आउने, कतिमा खुल्ला पहिलाे काराेबार ?
आइतबार, १० असोज २०७८, १३ : १७ मा प्रकाशित
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा आज (आइतबार) मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको साधारण सेयर (आईपीओ) सूचिकृत भएकाे छ ।
मागभन्दा धेरै आवेदन परेकाे हुनाले आईपीओ गाेलाप्रथाद्वारा बाँडफाँड गरिएकाे थियाे । अन्तिम दिनसम्ममा २३ लाख ६१ हजार ८ सय २७ जना आवेदकले आवेदन दिएकोमा ७ हजार ४३ जनाको आवेदन रद्द भएको थियाे । त्यसैले बाँडफाँडमा २३ लाख ५४ हजार ७ सय ८४ जना याेग्य आवेदकलाई समावेश गराइएकाे थियाे । गोलाप्रथाबाट वितरण गर्दा ३६ हजार ८ सय ५९ जनाले १० कित्ता सेयर पाएका थिए । जसमध्ये ३ जना आवेदकले थप १ कित्ता गरेर कूल ११ कित्ता सेयर पाएका थिए । बाँकी २३ लाख २४ हजार आवेदकको भने हात खाली भएकाे थियाे ।